वीरेन्द्रनगर : राजधानी बन्यो, सडक बनेन, प्रदेशको बजेट फ्रिज हुने अवस्था | NewsKarobar
गृहपृष्ठ वीरेन्द्रनगर : राजधानी बन्यो, सडक बनेन, प्रदेशको बजेट फ्रिज हुने अवस्था
वीरेन्द्रनगर नगरपालका कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । राजधानी भएको नाताले वीरेन्द्रनगरलाई केही थप जिम्मेवारी पनि छ । तर, यसको अर्थ अरु धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दा राजधानीबासीले सास्ती खेपिरहनुपर्छ भन्ने हो र ? नागरिकको पीडामा मलम लगाउन नसक्ने सरकारको के काम ? यस्ता प्रश्न आमनागरिकको मनमा उब्जिएका छन् ।
अहिले वीरेन्द्रनगरबासीले सडकको सास्ती खेपिरहेका छन् । सडकमा खाल्डामात्रै देखिन्छन् । सडक मर्मत गर्न छुट्याएको बजेटले केही टालटुल गरे पनि ६ महिना नपुग्दै ती सडक भत्किएर फेरि उही अवस्थामा पुगेका छन् ।
नगरका साना, ठूला सबै सडकको खाल्डाखुल्डीका कारण वीरेन्द्रनगरबासी हैरान छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसददेखि मन्त्रीसम्म खाल्डे सडकमा उफ्रिँदै यात्रा गर्छन् । तर, त्यसलाई मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि बजेट नभएको भन्दै समस्याबाट पन्छिएको छ ।
नगरका सडकको दुरुह अवस्था देखिरहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदी बजेट अपुग भएकै कारण सडक सुधार गर्न नसकेको बताउँछन् । विमानस्थलदेखि गणेश चोकसम्मको बाटो टेन्डर भएर काम सुरु भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण केही दिन ढिलाइ भएको उनले बताए ।
प्रमुख सुवेदीका अनुसार असार मसान्तसम्म केही बाटोको काम सम्पन्न हुन्छ । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सबै बिग्रेका बाटा टाल्न लागि पैसा नपुगेको हो, ‘उनले भने, ‘नगरपालिकासँग भएको डेढ करोड बजेटसम्मको काम हामीले अगाडि बढाएका छौं ।’
सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिने आश्वासनमात्रै दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘प्रदेशको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अझै पनि प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ कि भन्ने आशामा छु,’ उनले भने ।
नगरपालिकासँग भएको साधन स्रोतले भ्याएसम्म नगरका सडक सुधार्दै लैजाने योजना रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगरका सडकलाई थप प्राथमिकता दिनेछौं,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मर्मतसम्भारका लागि डेढ करोड छुट्याएको र नयाँ योजना निर्माणमा साढे १७ करोडको काम भएको उनले जानकारी दिए ।
सुर्खेतबासी भन्छन्- सडक सकसपूर्ण
सर्वसाधारणले भने वीरेन्द्रनगरको सडक सकसपूर्ण रहेको गुनासो गरेका छन् । सडकका खाल्डाका कारण दुर्घटनाको खतरा बढेको उनीहरु बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सडक यात्रा जनताका लागि सकसपूर्ण रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, नेवारे मा बस्दै आएका खत्रीले दैनिक बाटोमा यात्रा गर्दा सडकका खाल्डाखुल्डीबाट प्रताडित हुनुपरेको गुनासो गरे । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी भईकन पनि सडकको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने । सडक निर्माणका क्रममा विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानीलगायतका संस्थासँग समन्वय नगरी काम अघि बढाउँदा सडक थप दुरुह बनेको उनको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ की सीता रोकाया पनि भत्किएका सडकमा दैनिक ओहोरदोहोर गर्न निकै कठिन हुने बताउँछिन् । ‘सडकका खाल्डाखुल्डी र धुलो देख्दा नगरले जनताको काल सडकमै बोलाइदिए जस्तो लाग्छ,’ उनले कडा शब्दमा भनिन्, ‘कर्णालीको राजधानीका नगरको सडकको हालत त यस्तो छ, अन्य ठाउँका जनताको अवस्था झन् कस्तो होला ?’
सवारी चालकदेखि पैदल यात्रु र व्यापारीले समेत सडक र धुँवाधुलोका कारण सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । सवारी चालक केशव खत्रीले सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए । एकातिर स–साना दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ अर्कातिर भत्किएको सडकमा दिनभर गुड्दा झन् धेरै थाकिने उनको गुनासो छ । ‘त्यसमाथि सडक किनारामा हुने सर्भिस सेन्टर र सडकमा हुने पार्किङ सहरी सौन्दर्यको बाधक बनेका छन्,’ उनले भने ।
पछिल्लाे - हाडनाता करणीका फरार अभियुक्त चार वर्षपछि पक्राउ
अघिल्लाे - पाँचथरमा दुई परिवारका नौ जनाको बीभत्स हत्या